China Wall light ML1021 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Eurborn
Jiro fampisehoana Miniature misy fananganana Stainless Steel nomena ho IP65 manao ity vokatra ity mety ho an'ny fampiharana anatiny sy ivelany. Ny vokatra dia tari-dalana ary tonga lafatra noho izany ny jiro mifantoka amin'ny jiro amin'ny rindrina na ao anaty vata fampirantiana. Glass vera, mampiditra CFT USA LED chip fotsy napetraka miaraka amina 1W na 2W. Angovo ambany, tsy misy vahaolana fikojakojana。 Misy maodely telo amin'ity jiro rindrina ity. Misy safidy maromaro ho an'ny mpitazona jiro. Ary ny fitoeran-jiro dia azo soloina amin'ny tanana mba hahatratrarana ny lalana tokony hizorana. Hotely maro no nisafidy ity kanto ity ho an'ny haingo sy ny jiro. ML1021 dia vita amin'ny jiro 1W iray sy fototra iray, ary andiana fianakaviana iray ahitana ML1021, PL021, PL023, ary PL026. Azonao atao ihany koa ny mahita ny bika avy amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ao amin'ny pejin-tranonkalan'ny tranokalanay amin'ny fomba mahomby kokoa .. ML1022 sy ML1022-30 dia samy vita amin'ny jiro 1W roa sy ny fotony ary ny ML1022-30 kosa manana zoro mihodina 30 degre. Manome anao ny safidy ny zoro andry 20/60 sy loko Mazava: CW, WW, NW, Mena, Maitso, Manga, Amber.
Loko maivana CW, WW, NW, Mena, Maitso, Manga, Amber
fahefana 1W / 2W
Lanja N / A
Naoty IP IP65
Fampiharana Trano anatiny / ivelany / Landscape
MAZAVA WALLOLA ML102
ML1021 CREE CW, WW, NW, Green Green, Blue, Amber S20 / F60 Rivotra tsy tapaka 350mA andian-dahatsoratra 1W 1.1M 2X24AWG Tariby 100LM D45X53 N / A
ML1022 CREE CW, WW, NW, Green Green, Blue, Amber S20 / F60 Rivotra tsy tapaka 350mA andian-dahatsoratra 2W 1.1M 2X24AWG Tariby 200LM 35X75X56 N / A
ML1022-30 CREE CW, WW, NW, Green Green, Blue, Amber S20 / F60 Rivotra tsy tapaka 350mA andian-dahatsoratra 2W 1.1M 2X24AWG Tariby 200LM 43X75X56 N / A
Teo aloha: Jiro loharano FL411
Manaraka: Jiro rindrina EU1808
Jiro amin'ny rindrina ivelany maoderina
EU1920 ao anaty
GL119T ao anaty
GL180 ao anaty
Hazavana tsipika EU2009
Jiro rindrina EU1820